Yakaburitswa WebThings Gateway 0.9 Mozilla chikuva cheIot | Linux Vakapindwa muropa
Yakaburitswa WebThings Gateway 0.9, chikuva cheMozilla cheIot
Mozilla nguva pfupi yadarika yakaburitsa vhezheni itsva yeplatform yayo yeinternet yezvinhu (Iot) WebThingsGateway 0.9futi yekuvandudza kuWebThings Sisitimu 0.12 maraibhurari, izvo zvinoumba iyo WebThings chikuva uye izvo zvakare zvinopa zvikamu zvekuwana akasiyana akasiyana matunhu evatengi zvigadzirwa uye vanoshandisa yepasirose Web Zvinhu API kuronga kusangana pamwe navo. Izvo zviitiko zveprojekti zvinogoverwa pasi peMPL 2.0 rezinesi.
Izvo zvakakosha kuyeuchidza vaverengi vedu kuti WebThings Gateway inzvimbo yepasirese yekuronga kuwana kune akasiyana mapoka evatengi veIoT nemidziyo, kuviga hunhu hwepuratifomu yega yega uye pasina kuda kushandiswa kweakanangana nekushandisa kweumwe neumwe mugadziri.
Gateway firmware yakagadzirira akasiyana siyana Raspberry Pi mamodheru, OpenWrt uye Debian mapakeji aripo.
Gateway inogona kuiswa pane Raspberry Pi uye uwane smart smart control system iyo inosanganisa ese maIoT zvishandiso mumba uye inopa maturusi ekutarisa uye kuatonga iwo kuburikidza newebhu interface. Iyo chikuva zvakare inokutendera iwe kuti ugadzire yakawedzera webhu kunyorera ayo anogona kusangana nemidziyo kuburikidza neWebhu Thing API.
1 Main nyowani maficha eWebThings Gateway 0.9
Main nyowani maficha eWebThings Gateway 0.9
Iyi vhezheni itsva ye WebThings Gateway inomiririra kusimudzira kwemapakeji akavakirwa paWorldWrt iyo inogonesa kushandiswa kweasina waya ma routers kwete kwete chete kupa network kuwana, asiwo se smart smart control node.
Kusanganisira iko pachako kusimudzira kwekupararira kwepasi neOverWrt inosanganisa Gateway zvinhu, zvinopa kubatana kubatana kwe smart smart setup uye isina waya yekuwana poindi.
Iyo OpenWrt firmware inopa yekutanga dhizaini interface iyo inobvumidza mushandisi kumisikidza mudziyo wavo kuti ushande seasina waya yekuwana poindi kana semutengi kuti ubatanidze kune iripo waya isina waya network. Iko kushanda kweichi chitsva kuvaka kuchiri kushomeka uye kuchiri munzvimbo yekuyedza uye hakugone kutsiva zvachose marara aripo asina waya.
Chimwe chakakosha hunyanzvi ndiko kutsigira kuita kweiyo nyowani vhezheni yeRaspberry Pi 4, iyo, semamwe makadhi eRaspberry Pi, akagadzirira ega gungano pahwaro hwekuparadzirwa kweRaspbian.
Pakati pekuvandudzwa kwebasa, iko kuitiswa kwerudzi rutsva rwemawedzera-ons (Notifier) ​​anomira kunze, izvo zvinobvumidza kuwedzera iyo meseji yekuendesa meseji yaimbovepo kuburikidza nekuzivisa kwePush mubrowser.
Notifier inobvumidza mushandisi kugona kugadzira vatongi uye kumisikidza mitemo yekutumira mameseji kuburikidza nenzira dzakasiyana dzekutaurirana, semuenzaniso, kutumira mameseji kana maemail kana ma sensors anofamba ari mumba akaiswa. Iwe unogona kuseta iko kwekutanga kwezaziso zvakatumirwa.
Sezvo seGedhi inotsigira mashandiro akaita sekuwanikwa kwemidziyo munharaunda yemuno, kusarudzwa kwewebhu kero yekubatanidza kune zvishandiso kubva paInternet, kugadzirwa kwemaakaundi kuti uwane iyo webhu interface yegedhi, kubatana kwemidziyo inoenderana iine patent ZigBee uye Z-Wave protocols.
Pamusoro peiyo webhu interface uye API, inopawo kuyedza kwekuyedza kwekutonga kwezwi, kubvumira kuzivikanwa nekuitwa kwemirairo yezwi (semuenzaniso, "batidza mwenje mukicheni").
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Yakaburitswa WebThings Gateway 0.9, chikuva cheMozilla cheIot
Wayland 1.18 inosvika nekuvandudzwa kweprotocol uye kugadzirisa bug